dhiri: at & t inopa yemahara apple tv 4k kana iwe uchisaina-up kune yayo directv ikozvino sevhisi
Kuru Nhau & Ongororo Deal: AT & T inopa yemahara Apple TV 4K paunosaina-up kune yayo DirecTV IZVO sevhisi
Nhau dzakanaka dzevateveri veApple vasina & apos; asi vachiri yavo Apple TV 4K , sezvo AT & T ikozvino ichipa imwe yemahara kune wese munhu anoibatanidza DirecTV IZVO sevhisi . Iwe haufanire kana kusaina kwegore zvisati zvaitika, izvo zvinoita kuti chive chibvumirano chiri nani kana iwe & apos zviri mumusika weApple TV.
Zvino, izvi ndizvo zvaunofanira kuziva usati watora AT & T & chibvumirano . Chekutanga, kukwidziridzwa kunongowanikwa kune avo vasina kumbobvira vanyorerwa kuAT & T & apos; s DirecTV IZVOZVI. Chechipiri, iwe & apos; uchazobhadhara kwemwedzi mina yekutanga yebasa pamberi, uye nemutengo wakazara, tinogona kuwedzera.
Iye anotakura akataura zvakare kuti kukwidziridzwa kunoda yakaderera $ 50 / mwedzi kunyoreswa pamberi pemitero, asi AT & T DirecTV IZVO zvirongwa zvinotanga pamadhora makumi mashanu / mwedzi zvakadaro. Kana iwe uchironga kusaina-kuAT & T & apos; s sevhisi pamhepo, iwe unofanirwa kubvumidza 1-2 mavhiki ekuendesa. Ramba uchifunga kuti dhiri racho rakaganhurirwa ku1 paDirecTV IZVO nhoroondo uye kuti haugone kuisanganisa nezvimwe zvinopihwa.
AT & T & apos; s DirecTV IZVO ZVINODA inoda $ 50 / mwedzi kunyorera uye inopa anopfuura makumi mana chiteshi, kusanganisira HBO. Nekudaro, ye $ 70 / mwedzi, iyo AT&T DirecTV IZVO nguva Max chirongwa chinopa 50+ chiteshi uye kunyangwe yakawanda yemitambo kufukidza, pamwe neHBO neCinemax.
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, iyo DirecTV IZVO chibvumirano haina kudzoserwa uye ma & apos anowanikwa kusvika Kubvumbi 30, saka yakawanda nguva yekufunga kuti inofanirwa nemari yako here kana kuti kwete.
akanakisa ekuona mabhendi egear s3
Verizon uye AT & T iPhone XS inouya ne $ 350 Target kadhi kadhi dhizaini
Inogona here iyo Galaxy S9 kuyera yako BP? Isu tinoisa iyo nyowani nyowani yekuyedza ...
Verizon inotanga kugadzirisa iyo Samsung Galaxy S4 ku Android 5.0.1 Lollipop
Facebook Messenger app inowana yetsika tambo mavara, emojis uye mazita emadunhurirwa, hezvino & apos; s mashandisiro avo
Verizon & apos; s 'Unondinzwa izvozvi here?' pitman ikozvino neSprint
Vanyoreri veAT & T / Cricket: tsvaga kana iwe & apos; tiri mumutsara wekugamuchira 10GB yemahara data kwemwedzi miviri
Apple inogona kukurumidza kurega iwe unsend iMessages